Amai Makarau Vanoti Chirongwa cheBVR Chiri Kufamba Zvakanaka
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Amai Rita Makarau.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, Amai Rita Makarau, vanoti vakaswera Chitatu chese vachitenderera kuChitungwiza neEpworth uko vange vachiona kuti hurongwa hwekunyoresa vavhoti huri kufamba sei.
ZEC yakatanga kusimbaradza kunyoresa vavhoti nemusi weChipiri yavari kuti “blitz” ichivhura nzvimbo dzekunyoresa dzakati wandei.
Asi mapato anopikisa uye mamwe masangano akazvimirira anoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka sezvo sangano reZEC riri kunzi harina kunyatsogadzirira.
Vanhu vari kuchema chema kuti mamwe mahofisi eZEC ari kunonoka kuvhurwa, kana kuti pane pasina zvikwanisiro kana vamwe vanhu vanodiwa zvikuru pakutoresa vanhu mhiko kana vauya nemapepa akanyorwa pavanogara kana kuti maaffidavits.
Asi Amai Makarau vanoti panogona kunge paine kunonoka mune dzimwe nzvimbo asi vakagadzirira zvikuru uye pavatenderera vaona kuti zvinhu zvose zviri mugwara nekudaro vanokwanisa kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe.
Nzvimbo Dzinonyoreswa Vavhoti - Chikamu Chekutanga - 10-25 Gumiguru, 2017